Dharbaaxo kale oo ku dhacday Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidanka dowladda ayaa jug xoog leh gaarsiiyay Kooxda Al-Shabaab kadib markii ay uga dileen in ka badan 200 oo xubnood dagaal maalmo ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe.
Jeneral Odowaa Yuusuf Raage, oo ah taliyaha Ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen tuuladda Jilable ay ku dhinteen 70 dagaalyahan, oo ay ku jireen hogaamiyeyaal sare.
Howlgalkan waxaa dhanka Ciidanka dowladda uga dhintay askar dhowr ah iyo taliyihii guutada 6aad ee Gorgor Gaashaanle Maxamed Abdiwaaxid, oo ahaa nin dhalinyaro ah oo wax ka yar labo bilood tababar Sarkaal kusoo qaatey Turkiga.
Odowaa wuxuu tilmaamay in dagaalladii dhacay tan iyo tobaadkii lasoo dhaafay ay dharbaaxo culus ku dhufteen Al-Shabaab oo laga saarey degaanno, islamarkaana laga dilay tiro aad u badan, iyadoo Kooxda hadda sameynaso dib u gurasho markii laga adkaadey.
Taliyaha maalmo kahor wuxuu sheegay in duulaan ay ku qaadi doonaan dhamaan degaanada ay Al-Shabaab ka taliso, iyadoo ujeedku yahay isku furista jidka Muqdisho iyo Afgooye, oo dhawaan lagu dilay Xildhibaanno iyo Saraakiil katirsan HirShabeelle.
Labada dhinac ayaa isku fara saarey sidoo kale tuuladda Warta-Ciise, oo hadda ay la wareegeen Ciidamada dowladda Soomaaliya oo isku dayaya inay Al-Shabaab ka saaraan goobaha fara ku tiriska ah ee ay ka maamusho Sh/Dhexe.
Al-Shabaab ayaa aad ugu awood badan labada Shabeelle, oo xuduud la leh Muqdisho, waxaan kasoo gala dhaqaale aad u badan oo ay kusii wado dagaalka ay kula jirto dowladda Soomaaliya iyo AMISOM.